Verizon's LG V30 na-emesị nweta gam akporo | Gam akporosis
Na ngwụcha ọnwa Julaị afọ a, LG malitere ịhapụ mmelite maka V30 nke gbakwunyere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ọtụtụ ndị bụ ndị ọrụ nke ngwaọrụ a natara ya na ndị na-anụrịrị uru niile nke OS a. O di nwute, LG V30 Verizon erughị eru ụdị ngwungwu ngwa ngwa a, ruo ugbu a.
Emezighi nkwalite ekwentị mkpanaaka, ma e nwere ugbua ndekọ na-egosi na ụfọdụ ụdị ugbua nwetara ya, na ndị na-esonụ nseta ihuenyo nke otu ihe ahụ anyị na-egosi ugbu a na-egosi ya.
LG V30 bụ ama ama ama dị elu nke mechara kụọ ahịa na August 2017. E mere ya ka ọ bụrụ onye ọrụ nwere P.6.0-inch inch 2,880 nke nwere 1,440 x 18 pixel (9: 835) QuadHD + mkpebi, ihe nhazi Snapdragon 4. , 64 GB nke Ram na 128/7.1.2 GB nke ohere nchekwa dị n'ime. Na oge mbụ ya, gam akporo Nougat XNUMX bụ OS etinyegoro na ọnụ ya, ọ dị mma ịkọba ama. Nke a bụ ma eleghị anya ọkwá kachasị kachasị ikpeazụ ị na-enweta; ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-adị gam akporo 10. Mgbanwe zuru ezu maka mmelite ahụ bụ ndị a:
Nseta ihuenyo nke gam akporo achịcha maka LG V30 si Verizon
Home aka mkpọchi na ogbugbu: swipe elu na Home button ka ịgbanwee gaa na Isi ma ọ bụ App drawer. Mịa aka nri iji gaa ngwa kachasị eji rụọ ọrụ.
Jiri igodo olu maka mgbasa ozi: na-agbanwe ihe igodo olu ndabara site na ụdaolu na ụda mgbasa ozi site na ndabara.
Mkpọchi nhọrọ: na-etinye ekwentị na steeti ebe enweghị ike iji biometrics mee ihe, ihe ngosi mkpọchi mkpọchi niile zoro ezo, Smart Lock na-agbanyụkwa.
Nseta ihuenyo thumbnail: mgbe nseta ihuenyo na-ẹka, ya preview na-egosipụta na ala nri nke ihuenyo na a tọmbneelụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Verizon's LG V30 na-emesị nweta gam akporo
Vivo Nex 3 5G na-egosi ọzọ na ezigbo foto: ha na-akwado atụmatụ ya nke igwefoto okirikiri na ihuenyo cascading
Enwere ike ịpụta ụdị ọhụrụ nke Realme XT n'oge na-adịghị anya